Ngwa 5 kacha akwụ ụgwọ kacha mma ị kwesịrị ịnwale ma nwee tupu njedebe nke 2021 | Androidsis
Aaron Rivas | 29/11/2021 03:10 | Emelitere ka 29/11/2021 03:12 | Ngwa gam akporo, Mobiles
Ngwa ndị a na-akwụ ụgwọ bụ otu n'ime ọrụ na njirimara kacha mma nke Ụlọ Ahịa Google Play maka gam akporo. Ndị a, n'adịghị ka ndị nweere onwe ha, na-enwekarị ọrụ dị elu karị, n'ihi ya, ha zuru oke, n'ozuzu, na n'ọtụtụ ọnọdụ ha nwere nsụgharị n'efu nke na-adịghị enye ọbụna ọkara nke ihe ndị a na-akwụ ụgwọ na-eme. Ọ bụ ya mere ha ji kwesị inwe ma ọ bụ, opekata mpe, ịnwale ha.
Ya mere ugbu a anyị na-egosi gị ngwa 5 kacha akwụ ụgwọ kacha mma iji kwụsị afọ nke ọma. Ndị niile anyị depụtara n'okpuru sitere na ngalaba na ụdị dị iche iche. N'ihi nke a, ị ga-ahụ ngwa dị iche iche maka ojiji na ebumnuche dị iche iche. Ị nwere ike ịmasị ụfọdụ ma ọ bụ karịa n'ime ha, yabụ na ha kwesịrị ịlele.
2 KWGT Kustom Wijetị Onye Mere
3 Ra dị ka gam akporo Kpọghe
4 Overdrop Pro
Anyị na-amalite na TouchRetouch, ngwa na-edezi foto na onyonyo nke na-enye gị ohere ikpochapụ na ihichapụ ihe ọ bụla achọghị nke dị na agba. N'ụzọ dị otú a, ngwa ahụ nwekwara ike tufuo nkọwa dị ka ntụpọ akpụkpọ anụ, pimples, wrinkles, spots na, na-aga karịa ụgbọ elu n'ozuzu, ọbụna eriri, ihe ịrịba ama, nnụnụ nke eluigwe na ihe niile nwere ike imebi foto dị mma. ma ọ bụ oyiyi.
Iji mee mmetụ aka zuru oke, naanị ị ga-ahọrọ akụkụ ndị ịchọrọ iwepụ, ma ọ bụ site na ịpị ihuenyo ma ọ bụ na-amanye mkpịsị aka gị dị ka a ga-asị na ọ bụ pensụl. Ọgụgụ isi na ngwa nchọpụta dị elu nke ngwa a nwere ga-ahụ maka iwepụ ihe kwesịrị ozugbo, n'egbughị oge ọ bụla. Ekele maka nke a ị nwekwara ike họrọ ihe ahụ na ọ ga-amata ya nke ọma ozugbo, n'agbanyeghị ma ọ bụ ihe na-emekarị ma ọ bụ nke na-adịghị mma.
KWGT Kustom Wijetị Onye Mere
Nke a bụ otu n'ime ngwa ịkwụ ụgwọ kacha adọrọ mmasị maka gam akporo niile, Obi abụọ adịghị ya. Ma ọ bụ ihe okike wijetị dị ike nke na-enye gị ohere ịhazi ihuenyo ụlọ n'ụzọ dị iche iche, nke ọ bụla nwere ike imepụta ihe karịa nke ọzọ.
Mee atụmatụ wijetị nke gị. Mepụta wijetị maka elekere dijitalụ na analog, ihu igwe, ebe nchekwa, ederede na mita batrị, n'etiti ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ ị nwere n'aka na KWGT Kustom Widget Maker. Ị nwekwara ike ịme wijetị onyonyo na-agbanwe na-akpaghị aka site n'oge ruo n'oge, ma ọ bụ mepụta egwu ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ mbara igwe.
N'aka nke ọzọ, ngwa a ọ na-abịa na ụyọkọ wijetị ịhọrọ na ọnọdụ n'ọnọdụ mmasị na ihuenyo ụlọ mkpanaka. Na mgbakwunye, dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughị oke, ị nwere ike ịhazi ederede nke ndị a ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, ihe fọdụrụ, agba, mmebi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Developer: Lọ ọrụ Kustom
Ra dị ka gam akporo Kpọghe
Onye ọ bụla kwuru na iteta n’ụra bụ otu n’ime ihe kacha njọ n’ụbọchị bụ n’ihi na o mebeghị mgbalị Ụra mgbasa ozi Android Kpọghe. Ngwa a bụ onye na-ahụ maka ịkpọte mmụọ dị ụtọ, mana nke mbụ, ị ga-ekwupụta nke ọma maka mkpu na-emebu, nke na-egbochi gị na nrọ gị miri emi wee jide n'aka na ụra adịghị eweghachi dị ka ọ kwesịrị ịdị mgbe niile.
N'ụzọ bụ isi, Ngwa a na-akwụ ụgwọ bụ elekere smart nwere nleba anya okirikiri ụra. Ya mere, ọ na-enye data nsuso ụra nke e debere na eserese akụkọ ihe mere eme nke ezumike. Ọ nwekwara ọnụ ọgụgụ nke ụkọ ihi ụra, ụra miri emi na snoring, nke ọ na-enweta dabere na nlekota na-aga n'ihu nke izu ike nke onye ọrụ. Ọ na-abịa na elekere mkpu smart nke, n'etiti ọrụ ndị ọzọ, na-enye edemede nke nta nke nta iji gbochie usoro ịgbalite onye ọrụ na mberede na, ya mere, adịghị mma. N'ụzọ dị otú a, ụda mkpu na-abawanye nke nta nke nta.
Ọ na-enye ohere iji ndepụta ọkpụkpọ dị ka mkpu ma na-abịa na ụda eke na ụda dị ụtọ dị ka nnụnụ, ebili mmiri nke oké osimiri, oké ifufe na ihe ndị ọzọ. Ọ na-nwere a nchekwa data nke songs na ụda eke binaural maka ụra ngwa ngwa, onye na-edekọ mkparịta ụka abalị, mgbochi snoring ụda na snoring detector, ma ọ na-akwado nlekota ụra nke Pebble, Android Wear, Galaxy Gear SmartWatch.
Ee eziokwu. Enwere ọtụtụ ngwa ihu igwe na Ụlọ Ahịa Play, ma ọtụtụ bụ n'efu. Ka o sina dị, Overdrop Pro, nke bụkwa ngwa ihu igwe na-akwụ ụgwọ, na-enye interface pụrụ iche ma dị ike, yana ọrụ dị elu karịa ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere o ji nwee ohere ya na nchikota a.
Isi njirimara ya nwere njikọ na ọtụtụ wijetị ọ na-enye, ha niile nwere ọdịdị pụrụ iche nke na-arụ ọrụ iji hazie ihuenyo ụlọ na, olee otú ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, na-egosi ozi ihu igwe nke oge. N'otu oge ahụ, Overdrop Pro kokwasara ụzọ mkpirisi n'ime ogwe ngosi nke na-adịghị emetụta ma ọ bụ na-akpasu iwe.
Na mgbakwunye na ọnọdụ ihu igwe, Ngwa ahụ na-egosikwa nrụgide ikuku, ohere nke mmiri ozuzo, pasentị ígwé ojii na mkpuchi, na iru mmiri. Ọ nwekwara ike ịnye ozi nke gụnyere amụma maka ụbọchị 7 na-esote.
Cartogram Ọ bụ, opekata mpe, otu n'ime ngwa akwụ ụgwọ kacha adọrọ mmasị n'ebe ahụ taa, ebe ọ dị iche na akwụkwọ ahụaja ahụkarị. Nke a na-enye ohere ịhazi na imepụta akwụkwọ ahụaja site na ijide ọnọdụ nke maapụ. Ị nwere ike ịhọrọ ụdị na imewe nke mmasị gị, iji hazie ihuenyo ụlọ gị ka ọ masịrị gị.
Na ajụjụ, Cartogram nwere repertoire nke nwere ihe dị ka ụdị maapụ iri atọ ịhọrọ, gụnyere akwụkwọ ahụaja raara nye ihuenyo teknụzụ AMOLED nke na-enyere aka ịchekwa batrị n'ihi na ha na-eji ojii dị ọcha. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ agba na nchikota ime akwụkwọ ahụaja dị ka masịrị gị. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịnwale ngwa ahụ n'efu tupu ịkwụ ụgwọ, iji nyere gị aka ịma ma ọ bụ n'ezie ihe ịchọrọ.
Cartogram - akwụkwọ ahụaja Live Maps
Developer: Gburugburu ụlọ elu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 5 kacha akwụ ụgwọ kacha mma ị kwesịrị ịnwale ma nwee tupu njedebe nke 2021
Tivify: kedu ihe ọ bụ na kedu ka ọzọ na Netflix si arụ ọrụ?